क्यान्सरलाई कसरी चिन्ने ? अनि जोगिने कसरी ?-Brtnepal.com
Loading... क्यान्सरलाई कसरी चिन्ने ? अनि जोगिने कसरी ?
किशोर कुमार प्रधानाङ्ग
Published on September 13, 2016 at 10:06 pm
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डव्लुएचओ) का अनुसार हाल विश्वमा १ करोड ४१ लाख जनामा नयाँ क्यान्सर देखिएको छ । डव्लुएचओले नै क्यान्सरकै कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ८२ लाख पुगिसकेको जनाएको छ । र यदि अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै गएमा सन् २०२५ सम्म १ करोड ९३ लाख जनामा क्यान्सर देखिने अनुमान गरेको छ ।
क्यान्सर रोगको मुख्य कारक तत्वको खोजी गर्दा बदलिदो जीवनशैली, खानपान, बाताबरणीय प्रभाव प्रमुख रूपमा आउँछ । नेपालमा यी तिनै पक्षहरू क्यान्सर रोगका लागि अनुकूल सिद्ध भएको पाइएको छ । त्यसैले पनि हामीकहाँ क्यान्सरका बिरामी दिनानुदिन बढी रहेका छन् भन्न कुनै दुविधा छैन ।
क्यान्सर एक जटिल रोग हो तर पनि करिब ४० प्रतिशत क्यान्सर रोकथाम गर्न सकिन्छ । एक तिहाई अर्थात् ३३ प्रतिशत क्यान्सर समयमा पत्ता लगाएर उपचार गरी निको पार्न सकिन्छ । र बाँकी करिब २७ प्रतिशतलाई पनि उचित उपचारबाट आयु लम्याउन सकिन्छ । त्यो कसरी सम्भव छ रु त्यसका लागि यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
के के मा ध्यान दिने ?
निम्न चिन्ह तथा लक्षणहरु देखिएमा कतै क्यान्सर त भएको छैन भनी नजिकको स्वास्थ्यकर्मीकहाँ वा अस्पतालमा पुगेर देखाउने तथा सल्लाह लिई हाल्ने गर्नुपर्छ :
लामो समय सम्म खोकी निको नहुनु, खकारमा रगत देखा पर्नु ।
खाना निल्न गाह्रो हुनु, स्वर परिर्वतन वा धोद्रो हुनु ।
लामो समय सम्म कव्जियत हुनु, पातलो दिसा हुनु, दिसामा रगत देखिनु ।
महिलाहरुमा महिनावारी नभएको वेलामा रगत देखिनु, महिनावारी रोकिएका महिलाहरूको पुनः रक्तस्राव हुनु वा सहवास पछि रक्तस्राव हुनु ।
स्तनमा गाँठा गुठीहरू देखिनु, मुन्टोवाट रगत मिसिएको दूध आउनु वा मुन्टो दबिनु ।
शरीरमा गिर्खा, गाँठा गुठीहरू देखिनु ।
कोठी र मुसाहरूको रङ्ग बदलिनु वा आकार बढ्दै जानु ।
छोटो समयमै शरीरको वजन घटनु, रक्तअल्पता देखिनु, ज्वरो आईरहनु ।
नाक,मुख र दिसा बाट रगत आउनु ।
धेरै दिनसम्म टाउको दुखी रहनु, बान्ता हुनु, रिगंटा लाग्नु,आँखा धमिलो देखिनु वा कम्पन (मृगी) आउनु ।
निम्न उपाायहरू अपनाएमा क्यान्सर रोगबाट बच्न सकिन्छ :
चुरोट,बिंडी, खैनी, सुर्ती, जाँड, रक्सीको सेवन नगर्ने ।
बासी, सडेगलेको र ढुसी परेको खानाहरू नखाने ।
पोलेर डढेको मासु र अन्य खानेकुराहरू नखाने ।
अखाद्य रङ्ग, रसायनिक मल, किटनाषक औषधि प्रयोग गरिएका खानेकुराहरू नखाने ।
चिल्लो बोसोयुक्त खानेकुराहरू र धेरै नुन नखाने ।
धुलो,धुवाँ तथा वातावरणीय प्रदूषणबाट जोगिने ।
महिलाहरूले नियमित रूपले गर्भासय स्राव परीक्षण गर्ने ।
स्तनमा गिर्खा,गाँठागुठीे छ–छैन प्रत्येक महिना राम्ररी छामेर हेर्ने र फेला परेमा स्वास्थ्यकर्मीहरुसंग परामर्श लिने ।
दिनहुँ शारीरिक व्यायाम गर्ने, अनावश्यक मोटोपन घटाउने ।
मौसम अनुसारको हरियो सागपात, तरकारी र फलफुल दिनहुँ खाने ।
साबधान ! चिनी अल्कोहल जस्तै हानिकारक हो